Tanora · Oktobra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Oktobra, 2009
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Oktobra, 2009
Malawi: Fanatanjahan-tena sy Kamkwanba, ilay tovolahy namokatra angovo avy amin'ny rivotra
Malawi20 Oktobra 2009
Na dia mangina aza ny tontolon'ny bilaogy amin'ny ankapobeny dia nisy zava-niseho maro tany Malawi tato anatin'ny herinandro vitsivitsy izay. Vao tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nanao ady sahala tamin'ny Elefantan'i Côte d'Ivoire i Malawi ary anisan'ny mpilalao tamin'izany i Didier Drogba, mpilalao avy any Chelsea. Tao amin'ny kianjan'ny Kamuzu...
Kambodza13 Oktobra 2009
Nandray ny Barcamp Phnom Penh ny tontolo teknolojika Kambôjiana tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Ankoatra ny fahamaroan'ny mpanatrika avy ao an-toerana, dia nanintona mpandray anjara avy amin'ny firenena manodidina ihany koa ity Barcamp ity. Niresaka momba ny teknolojia sy ny hevitra hampiasana ny fitaovam-piseraserana avo lenta isan-karazany ho fampandrosoana ny mpandray...
Abidjan Blog Camps: Ny atrikasa voalohany
Cote d'Ivoire10 Oktobra 2009
Nikarakara ny fandaharam-pampiofanana ny fampitam-baovaon'olo-tsotra voalohany tamin'ity volana ity (septambra) ny Abidjan Blog Camps izay tetikasa vatsian'ny Rising Voices. Roger Kassé no manome fanampim-baovao momba ny atrikasa notontosaina ny 3 Septambra 2009: Noho ny fandraisana andraikitry ny sendikàn'ny mpanao gazety ao Côte d'Ivoire (UNJCI), sy ny niarahany niasa tamin'ny Fikambanana...